उपमेयर जितेलगत्तै सुनिता डंगोल विवाह गर्दै ! कोसँग बिहे गर्दै छिन् ? – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ ०५, २०७९ समय: १९:१९:०१
पूर्व मिस नेपाल, मोडल तथा टेलिभिजन संचालिक माल्भिका सुब्बाविरुद्ध यतिबेला सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता खनिएका छन्।
तर ती महिलालाई भने माल्भिकाले सहयोग नगरेको उनको गुनासो रहेको छ। आफूलाई यो विषयमा कुनै चासो नभएको माल्भिकाले उत्तर दिएको ती पीडित भनिएकी महिलाको भनाइ छ
यतिबेला माल्भिकालाई टिकटक, युट्युब र फेसबुकमा तुच्छ भाषामा आलोचना गर्न थालिएको छ।
उनलाई सामाजिक संजालमा अनफलो गर्नुपर्छ भन्ने अभियान नै सुरुवात भएको छ।
भरतपुर महानगरपालिकामा विपन्न र घरबाट स्कूल जान भौगोलिक दूरी टाढा भएका ६० छात्रालाई साइकल वितरण गरिएको छ। महानगरपालिकाले जोखिममा परेका ‘महिलासँग मेयर’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल वितरण गरेको हो।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
उनले महानगरले छात्रालाई नै लक्षित गरी निःशुल्करुपमा सेनेटरी प्याड वितरणदेखि स्कुल बस प्रदानसहितका शैक्षिक सुधारका आधा दर्जन बढी काम गरेको बताए। महानगरका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख महेन्द्र पौडेलले महानगरको शैक्षिक सुधार नीतिले यहाँ शैक्षिक आर्कषण बढेको बताए।*
Last Updated on: May 19th, 2022 at 7:19 pm